कैलाशको कुटी: गाउँप्रतिको अनुभूति
मेरो जन्मथलो भोजपुरको ठूलोदुम्मा भएकोले दुम्मालीहरुको ब्लग आफू सामु पाउँदा निकै नै खुशी लागेको छ । त्यही ब्लगमाफत सबैलाई एकबद्ध गर्न र गराउन खटेका दुई व्यक्तिहरुप्रति मनैदेखि आभार प्रकट गर्छु । जब म त्यहाँ आफ्नो जन्मथलोमा थिए । पारिवारिक कारणले नै त्यो ठाउँ निकै नै उकुसमुकुस लाग्थ्यो । पछिल्लो समयमा आएर त्यहाँबाट फुत्किएर स्वतन्त्र हुने र अर्कै माहोलमा बस्ने कल्पनाबाहेक अन्य कुरामा मेरो त्यत्ति ध्यान गएन । त्यसै क्रममा काठमाडौँको माहौलमा प्रवेश भयो । र, दु:खसुख जिन्दगी चल्दै गयो । तर आफू जन्मे-हुर्कको ठाउँ र परिवेश दिल र दिमागमा छापिएको एउटा नमेटिने हस्ताक्ष्रर रहेछ । त्यसैले आज पनि मलाई त्यो गाउँ, त्यहाँका साथीभाइ, नातागोता सबैको झल्झली याद आउँछ ।
म सँधै सोच्ने गर्छु, हाम्रो दुम्मा गाउँ किन यत्ति अविकसित र पछाडि परेको ? सायद मैले त्यहाँ भएको विकासको अनुभूति गर्न नपाएर पनि हुनसक्ला । तर आजपनि त्यहाँका कैयौँ आमा-आपा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु क्यान्सर, टीभी तथा अन्य विभिन्न रोग तथा दुर्घटनाबाट बच्न सकिरहेका छैनन् । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विकासले दिनदिनै भेटघाट गर्न सकिने हुँदा पनि धेरै खबरहरु पाउन सजिलो छ । र, गाउँघरमा राम्रो काम भएको वा गाउँ गतिशिल भएको खबर सुन्न लालायित छु, सायद यो स्वभाविकै होला । तर मेरो अपेक्षा बढी नै भएको हो वा के हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।
केही महिना अघि मात्रै म त्यहाँ पुगेको थिए । विकट दुर्गम गाउँको हिसाबले झेल्नुपर्ने सारोगाह्रो त छँदैछ । त्यसको बाबजुद पानीको अभाव, बनजंगलको फडानी, जनशक्तिको अभाव, बढ्‍दो आधुनिकीकरणको प्रभावजस्ता थुप्रै पक्षहरुले समस्याको रुप लिइरहेको महशुश गरे । धेरैजसो दाजुभाइहरु आर्थिक उपार्जनको लागि विदेशिएका छन् भने दिदीबहिनीहरु पनि गाउँघरमा भेटिन्नन् । त्यसको थुप्रै पक्षहरु नभएका होइनन् । पक्कै पनि छन् ।
यी सब कुरा भनिरहँदा बिना सन्दर्भको लाग्न सक्छ । मेरै पल्लो कोठाका छिमेकीहरुले खोटाङको विभिन्न गाउँको बारेमा योजना तथा कार्यत्रmमहरुको खाका तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्दै लगेको कुराले घरीघरी आफ्नो जन्मथलोको मूल्याङकन गर्न पुग्छु । र, म आशा गर्छु, हुनसक्छ यस्ता कुरा हाम्रो गाउँघरका व्यक्तिहरुले पनि गर्दै होलान् कतै, कुनै स्थानमा बसेर । मलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ ।
Posted by कैलाश at 4:42 AM
nice articles, keep it up and God bless you.
Admin Dummali said...
सर्ब प्रथम लेख को लागि धन्यवाद, र दुम्माली ब्लग लाई छोइदिनु भएको मा,
हाम्रो चाहना र मनशय दुम्माली हरु एकाबद्दत र एउटै बन्धन मा बाध्नु हो । र त्यसको अलवा सम्पूर्ण दुम्मालीहरु को साझा चौतारी मा एक आपस का सुख दु:ख
हरु आदन प्रदान होस् भन्ने हाम्रो मुल चाहना अनुरुप तपाईं हरु ले पनि सुझाब् र सहयोग गरी रहनु हुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण बिश्वास छ।